"Gurigayga Ayaan Dejinayaa Lionel Messi, Waanan Kusoo Dhoweynayaa Real Madrid..." - GOOL24.NET
“Gurigayga Ayaan Dejinayaa Lionel Messi, Waanan Kusoo Dhoweynayaa Real Madrid…”
Lionel Messi ayaa xor ka noqonaya Barcelona marka uu dhamaado xilli ciyaareedku, iyadoo qandaraaskiisu uu ku egyahay June 30.
Xiddiga reer Argentina ayaan la ogayn inuu ka tegayo Barcelona iyo inuu sii joogi doono kaddib markii maamulka kooxdu isbeddelay, laakiin haddii lagu cabbiro duruufihii jiray sannad ka hor, Leo ayaa waqtigaas dalbaday in la ambobixiyo oo aanu diyaar u ahayn inuu sii joogo.
Kooxaha PSG iyo Manchester City ayaa kursi gaaban ugu fadhiya sidii ay u heli lahaayeen laacibkan, laakiin ma haystaan hubanti ah in uu ka tegayo Barcelona, taas darteedna illaa daqiiqadda ugu dambeeya ayay sugi doonaan haddii ay ku guuleysanayaan saxeexiisa.
Kabtanka Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa isaguna ku jira duruuf la mid ah Lionel Messi, waxaana heshiiskiisa Camp Nou uu ku egyahay June 30, si la mid ah Lionel Messi.
Laakiin Ramos ayaa haddana u gacan haadinaya Lionel Messi si uu ugula biiro Real Madrid, waxaana xilli uu ka jawaabayay su’aalo laga weydiinayay baraha bulshada uu yidhi: “Aad ayaan ugu faraxi lahaa inaan Messi kusoo dhoweeyo Real Madrid. Waxa aan toddobaadyada hore u bannayn lahaa gurigayga.”
Ramos waxa uu sheegay inay ku dhibaatoodeen sidii ay u xidhi lahaayeen, taas darteedna uu jeclaan lahaa inay isku koox noqdaan halkii ay iska hor iman lahaayeen, waxaanu yidhi: “Waanu ku dhibaatoonay Leo sannadihii uu fiicnaa, sidaa darteed, xaqiiqada ah in aanaan ka hor tegin isaga way fiicnaan lahayd.
“Wuxuu naga caawin lahaa inaanu guuleysano iyo inaanu gaadhno guulo badan. Nacasnimo ayay noqonaysaa haddii aan wax kale idhaahdo.”
Sergio Ramos ayaa isaga naf ahaantiisa la weydiiyey haddii uu dhamaadka xilli ciyaareedka ku biiri karo Barcelona maadaama heshiiskiisa Real Madrid uu dhamaanayo, waxaanu ku jawaabay: “Maya, lagama yaabo.
“Anigu jacayl badan ayaan u hayaa Joan Laporta (Madaxweynaha cusub ee Barcelona), laakiin nolosha waxa jira waxyaabo aanad lacag ku iibsan karaynin. Si la mid ah sida aanad u arki karin Xavi Hernandez ama Gerard Pique oo u ciyaaraya Madrid…”